Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Hotelada & Dalxiiska Wararka » Buug iyo Socdaal kalsooni ku leh Goobaha Sandals
Wararka Antigua & Barbuda • Bahamas News Breaking • Barbados News Breaking • Jebinta Wararka Caalamka • Caribbean • Wararka Grenada • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Jamaica News Breaking • Wararka Raaxada • News • jiga • Aroosyada Jaceylka Malabka • Wararka Saint Lucia • Dalxiiska • Qiimaha Safarka | Talooyinka Safarka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Wararka kala duwan
Sandals Resorts - fasaxyo aan walwal lahayn
Hadday martidu hore u ballansadeen joogitaan mid kasta oo ka mid ah Goobaha Sandals-ka ee raaxada leh, ama haddii socdaalayaashu ay hadda uun ka fikirayaan hadda, Sandals-ka waayo-aragnimada fasaxa ayaa ah fasax aan walwal lahayn.
Resorts Sandals waxay soo bandhigtaa dhaqammada iyo siyaasadaha ugu wanaagsan ee loogu talagalay inay maskaxda martida ku dejiso.
Hadday tahay ballan -qaad hore u jiray ama dhowaan la samayn doono, martidu waxay ku nasan karaan inay Sandals iyaga daboolayaan.
Laga soo bilaabo caymiska ilaalinta safarka ilaa baajinta qolka bilaashka ah ilaa nadaafadda iyo in ka badan, Sandals waxay ka fekertay dhinac kasta oo fasax ah oo aan cidhiidhi lahayn.
Caymiska Qorshaha Ilaalinta Safarka ayaa na saaran!
Caawinta ilaalinta baahiyahaagu waa Mudnaantayada! Soo bandhigida cusub Qorshaha Ilaalinta Safarka. Adiga iyo dadka aad jeceshihiin waxaad la kulmi kartaan janno adiga oo og dhammaan boos -celinta hadda la sameeyay illaa Ogosto 31, 2021 ee socdaalka illaa Disember 31, 2022 si otomaatig ah ayaad u heli doontaa caymis kharashyada caafimaadka intaad ku jirto joogitaanka dalxiiska sidoo kale waxaa ku jira faa'iidooyin dhowr ah inta aad maqan tahay. Waxa ugu fiican oo dhan, waxay ku jirtaa annaga, oo lagu soo iibsaday magacaaga iyo qayb ka mid ah boos celintaada Sandals -ka.
Baajinta Qolka Bilaashka Ah Oo Hel 100% Soo Celin
Baajinta qolka bilaashka ah ee boos celinta ayaa la kansalay 31 maalmood ama ka badan kahor taariikhda soo gelitaanka (marka laga reebo Suites-ka Biyaha-dhaafka ah). Kani wuxuu quseeyaa oo keliya qaybta dhulka/qolka ballanta. Joojinta duullimaadyada waxay ku xiran tahay ganaaxyada iyo xannibaadaha wadayaasha diyaaradda.
Borotokoolka Platinum ee Nadaafadda
Borotokool dheeraad ah iyo heerarka nadaafadda ee la dammaanad qaaday si loo hubiyo la kordhiyay tallaabooyinka caafimaadka iyo badbaadada ee martida raadinaya nabadda maskaxda ee Kariibiyaanka.
Dib-u-gelitaanka Mareykanka/Kanada ayaa loo baahan yahay tijaabada COVID-19 ee Dalxiiska
Dhammaan tegitaannada Mareykanka iyo Kanada waxaa laga rabaa inay qaataan imtixaanka COVID-19 si dib loogu soo galo. Si loo hubiyo in tani ay tahay carqaladeynta ugu yar fasaxaaga, waxaan kuu diyaarinnay awoodda aad ku yeelan karto baaritaanka COVID-19 antigen-ka ee loogu talagalay dadka deggan Mareykanka iyo baaritaanka PCR ee degganeyaasha Kanada isla markaaba raaxadaada dalxiiskaaga. Tijaabooyinka waxaa samayn doona xirfadlayaal caafimaad oo la ansixiyay oo la tababaray oo leh ku -habboonaanta ugu badan iyo wax -u -jeedinta ugu yar ee khibradaada fasaxa guud. Tan waxaa lagu samayn doonaa 72 saacadood gudahood ka hor bixitaankaaga oo natiijooyinka baaritaankaaga waxaa lagu heli doonaa 24-48 saacadood gudahood.